Kôlômbia: Ny Famindràna Toerana Ny Mponin’i Ituango · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Loïc Le Henaff
Voadika ny 24 Mey 2017 13:01 GMT
[Raha tsy misy fanamarihana manokana, dia amin'ny teny Espaniôla daholo ny rohy ato] Tanàna kely ao Kôlômbia i Ituango any amin'ireo tendombohitra any avaratry ny departemantan'i Antioquia, 195 kilaometatra miala an'i Medellín [fr]. Nijaly be ireo mponina tao ary imbetsaka no voatery nandao ny taniny rehefa mandondom-baravarana ao amin'izy ireo ny fifandonana eo amin'ny mpanao ady anaty akata sy ireo vondrona mitampiadiana ivelan'ny tafika. Faritra iray manankarena i Ituango no sady mahantra ihany koa. Izay indrindra, tsy maintsy natrehan'ireo mponina tao ny governemanta izay nanandrana nanolotra ilay tetikasa famokarana herinaratra ahodin-drano ao Pescadero-Ituango ho anà orinasa vahiny. Tokony hahafahan'i Kôlômbia mamokatra herinaratra bebe kokoa io tetikasa io. Io dia antony iray ihany koa mahatonga ireo vondrona mitampiadiana maniry hifehy io faritra mbola voajanahary io.
Sarin'ireo olona nafindra toerana, an'i Adriana Jaramillo, famoahana nahazoana alàlana
Nandritry ny 30 taona, matetika voatery mandao ny tranony ny mponina tao ary mitady fialofana any amin'ireo sekoly sy toby any an-tanàndehibe ao Ituango. Tamin'io taona 2010 io, ohatra, ny 2 Aprily, maherin'ny 1.600 ireo olona nafindra avy any. Taorian'ny nanasoniavany fifanarahana iray niaraka tamin'ireo manampahefana ao Ituango, izay niantoka ny fiarovana azy ireo, naverina tsikelikely ho amin'ny taniny ny ankamaroan'izy ireo, saingy maro ireo mbola mipetraka any amin'ireo trano tsizarizary.
Ny sasany amin'ireo bilaogera ao Ituango, izay mpikambana ao anatin'ny tambajotra HiperBarrio [es.] dia naneho ny ahiahin'izy ireo tao amin'ny bilaoginy. Ohatra, i Roxana, ao amin'ny bilaogy El Rincón del Pensamiento, dia nanoritsoritra ny toedraharaha tao Ituango [es.].
Misy fanantenana ny hivahan'ity toedraharaha mampalahelo ity atsy ho atsy, satria tsy ireo nafindra irery ihany no voakitik'izy io, fa ny olona rehetra mihitsy. Tena faran'izay mampalahelo ny mahita ny olona lasa lavitry ny trano fonenany noho ny fahefana eo am-pelatànan'ireo olona sasany.
Adriana, ao amin'ny bilaoginy Ituango : Tesoro por Descubrir, dia manontany tena momba ilay toedraharaha [es.].
Ianareo ve tsy mieritreritra hoe tsy rariny ny tsy maintsy handehanan-dry zareo sy hamelàny ny zavatra rehetra indray mandeha indray ? Ho an'ny maro, ny toeram-piompiany, ho an'ny hafa angamba, mbola betsaka lavitra noho izany. Tena mety mampivarahontsana izany hoe rahonana tsy misy farany ho tsy maintsy miàla izany, tsy misy te-ho eo amin'ny toeran'izy ireo isika. Hoy ny ramatoa iray tamiko : “Mbola tsara kokoa ny misotro ranon-tsira ao an-tranon'ny tena noho ny mipetraka anaty trano tsizarizary sy miandry ny hafa mba hanome zavatra ho anao”.
Liana amin'ireo nafindra toerana ny bilaogy Hiperbarrio Ituango, La Belleza Oculta de Ituango [es.] :
Nitondra fanampiana tsara sy betsaka ho azy ireo ny fanjakàna. Betsaka tamin'izy ireo no afaka niverina nody tany an-tranony, saingy mbola mivelona amin'ny fanampian'ny kaominina hatrany ny sasany, na dia vitsy noho ny taloha aza ry zareo [es.].
Nilazalaza ny toedraharana misy eny an-toerana ny bilaogy La Colonia de Ituango no sady nanazava ny olana [es.] :
Isantaona isantaona, lasa miahiahy ireo mponina an-tanandehibe ary matahotra mihitsy aza manoloana ny fahatongavan'ireo fianakaviana tantsaha sasantsasany miaina anaty fialofana vonjimaika, noho ny resaka tsy fandriampahalemana mety aterak'izany, sy noho ny fahitàna ny kaominina lasa rakotra an'ireny mpialokaloka mpifindra monina ireny. Saingy tsy sainin-dry zareo ireo vokatry ny famindràna an-terisetra natao 13 taona lasa izay, nanomboka tamin'ny fitsofohana voalohany tao amin'ilay faritra notanterahan'ireo vondrona mitampiadiana ivelan'ny tafika. Ireo vokany toy ny fandaozana ny tany (miaraka amin'ny fahaverezan'ny vokatra, ny biby fiompy, ny voa), ny fihenàn'ny sakafo ao an-tanàna, ny fahantrana mamely ny olona, ny fandaozana sekoly ary ny fianahan'ny aretina mpiseho amin'ny tany mafàna.
Tsy maintsy manontany ny tenantsika momba io toedraharaha io isika, izay mety hiverimberina foana isantaona. Ary aza ilaozana mitady izay tomponandraikitra any anatin'ireo tantsaha nafindra toerana, fa ny faritra midadasika iadiantsika efa nandritry ny 30 taona ao amin'ny tanin'i Ituango no tokony hampiasa loha antsika. Ny 53% amin'ny tanin'ny kaominina misy ilay valanjavaboary ao Paramillo, ny eo anelanelany, 10% fanampiny, ary ho an'ilay fanorenana tohodrano ho an'ny Pescadero-Ituango sy ireo làlambe mirazotra, ny faritra manodidina ny renirano Cauca, toerana ahitàna tanàna am-polony, no tsy maintsy ho hajariana.
Anaty lahatsoratra iray hafa, ifantohan'ilay bilaogy ny momba ny fiverenan'ireo mponin'i Ituango [es.], izay napetraka tany aminà toby tany an-tanandehibe :
Miaraka amin'ny fiverenan'ireo tantsaha izay nandao ny vohitra nisy azy ireo tany El Cedral sy La Miranda, manomboka androany ny fiverenan'ireo Ituanguinos efa ho 1.500 mahery. Nandritry ny roa herinandro, nijanona tany amin'ny faritry ny tanàndehibe ry zareo noho ny tsindry sy ny fifandonana nitranga tany amin'ny faritra misy azy ireo. (…). Hody ihany koa amin'io Sabotsy io sy mandritry ny faran'ny herinandro ireo tantsaha avy ao Santa Ana. Hitohy miandàlana hatramin'ny Talata izany ary hamàrana ny toedraharaha iray vonjitaitra noho ny maha-olombelona, izay sarotra natrehana tokoa.
Izany no fiainana andavanandron'ireo olona ao Ituango.